[फिल्म] इम्तियाजले बिर्सनैपर्ने अध्याय - मनोरञ्जन - नेपाल
[फिल्म] इम्तियाजले बिर्सनैपर्ने अध्याय
दृश्यलाई काव्यिक शैलीमा पस्कने निर्देशकको छवि छ, इम्तियाज अलिको । पहिलो फिल्म सोचा ना थादेखि जब वी मेट, रकस्टार, हाइवे र तमासासम्म उनले आँखा र आँतलाई शीतलता प्रदान गर्ने दृश्यमार्फत मन छुने कथा भने । यत्ति हो कि उनी मसला र बजारको दबाबलाई कहिल्यै फिल्ममा ढिम्कन दिँदैनन् । यिनै सिर्जनशील निर्देशकको नयाँ फिल्म आएको छ, जब ह्यारी मेट सेजल । त्यो पनि चानचुने कलाकार होइन, शाहरुख खान र अनुष्का शर्माजस्ता सुपरस्टारसँग । शाहरुखका पछिल्ला फिल्म दिलवाले, फ्यान र रइस बक्स अफिस र समीक्षा दुवैमा चिप्लिए । त्यसैले पनि इम्तियाजसँगको जुगलबन्दीले शाहरुखको साख फर्काउने अपेक्षा थियो तर पुरानै शैलीको कथा र प्रस्तुतिले जब ह्यारी मेट सेजललाई पट्यारलाग्दो बनाएको छ । युरोपका विभिन्न देशका रमणीय दृश्यमा दौडिएको यो कथा दर्शककै दिलमा भने छिर्न सक्दैन । कारण हो, लेखक/निर्देशक इम्तियाज मुख्य पात्रको प्रेमको गहिराइसम्म पुग्न र त्यो भावना प्रवाह गर्न चुक्नु । जबकि, शाहरुखको अभिनयमा ताजापन छ ।
गुजराती युवती सेजल (अनुष्का) युरोप घुम्न जाँदा इन्गेजमेन्ट औँठी हराउँछ । उडान रद्द गरेरै औँठी खोज्न थाल्छिन्, जसमा उनलाई साथ दिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ टुरिस्ट गाइड ह्यारी (शाहरुख)लाई । स्वभाव नमिल्ने भएकाले ह्यारी उनीबाट मुक्त हुन खोज्छन् तर मिल्दै मिल्दैन । त्यसैले उनीहरू आँैठी खोज्न पहिले युरोपको जुन–जुन देश घुमेको हो, त्यहीँ फर्कन्छन् । सँगै यात्रा गर्दा कहिले झगडा पर्छ, त कहिले मिल्छन् पनि । त्यो औँठी नभेटी भारत फर्कन मरिगए मान्दिनन् सेजल । भेटिएला त ? अनि, उनीहरूको सम्बन्धमा कस्तो उतारचढाव आउला ? निर्देशकले क्लाइमेक्ससम्मै सामान्य दृश्यहरूलाई असामान्य महत्त्व दिएका छन् ।
पहिलो कुरा त इन्गेजमेन्ट औँठी खोज्नकै लागि पारिवारिक सदस्यबिना कुनै युवती हप्तौँ युरोप चक्कर लगाउने मुख्य प्लट नै विश्वसनीय लाग्दैन । जबकि, विवाह गर्न लागेको केटा र त्यो इन्गेजमेन्टप्रति सेजल उति गम्भीर देखिन्नन् । तैपनि, निर्देशकले मुख्य कलाकारलाई औँठीको पछाडि दौडाएको–दौडायै गर्छन् । आम्स्टडर्मबाट सुरु हुने औँठीको खोजी जर्मनी, हंगेरी, पाराग्वे हुँदै पोर्चुगलसम्म पुग्छ । तर, यो यात्रामा युरोपको सुन्दरतालाई कैद गरे पनि कथानक रोचक बनाउन निर्देशकको लगाव छैन । झिनो कथालाई समातेपछि पटकथा कसिलो हुनुपर्छ, नत्र दर्शकको ध्यान पर्दाबाट पर भाग्छ । विडम्बना ! यस्ता वितृष्णा जगाउने दृश्यको हालीमुहाली छ फिल्ममा । धीमा र सूक्ष्म शैलीमा कथा भन्न खोजे पनि रसिलो लाग्दैन ।
ह्यारीको चरित्र युवतीप्रेमी छ भन्ने थाहा पाउँदा–पाउँदै सेजल आफैँ नजिक हुन खोज्छिन् । बीच–बीचमा त यस्तो लाग्छ, औँठीको बहानामा नियतवश ह्यारीसँग सम्बन्ध गाँस्न खोज्दै छिन् उनी तर त्यस्तो पनि हुँदैन । फिल्ममा एउटा दृश्य त्यस्तो छैन, जसले दर्शकलाई चक्मा देओस् । कथा उठान र विस्तार मात्र होइन, क्लाइमेक्स पनि सपाट लाग्छ । भलै, मध्यान्तरपछि कथाको बहाव बढाइएको छ ।
आधुनिक युवकयुवतीको प्रेम, विवाह र परिवारप्रतिको मनोविज्ञान केलाउने प्रयास सार्थक छैन । सबभन्दा कमजोर पक्ष त कथा र पात्रलाई ‘रिलेट’ गर्नै सकिन्न । कथा जुन देशमा पुगे पनि उस्तै–उस्तै लाग्नु फिल्मको अर्को कमजोरी हो । हरेक दृश्यमा मुख्य पात्र छुट्दैनन् तर उनीहरूमा त्यही अनुरूपको प्रेम पनि हुँदैन ।
ह्यारीको फ्ल्यासब्याकमा ‘सरप्राइज’को अपेक्षा पैदा गराउन खोजे पनि फिक्का साबित हुन्छ, न त सेजलको विवाह गर्न लागेको केटासँगको सम्बन्धलाई भावनाको कसीबाट अवलोकन गरिएको छ । यात्राकै क्रममा ह्यारी र सेजलप्रति गहिरिएको सम्बन्ध पनि जीवन्त लाग्दैन । सुरुआतमा पात्रको ‘बन्डिङ’ संवादमार्फत चोटिलो बनाउने प्रयास गरेका छन् । लाग्छ, आफ्नो चिरपरिचित शैलीलाई पछ्याउन खोज्दा खोज्दै सतहमै रुमल्लिएका छन् इम्तियाज । तर, उनको कथा शाहरुखको स्टारडममै निर्भर भने छैन । फिल्म स्टारभन्दा चरित्रप्रधान छ तर के गर्नु, त्यही चरित्र बलियो छैन । कथासँगै नभए पनि दृश्यमार्फत युरोप शयर गरेको आभास हुन्छ । पन्जाबी गीत ‘लाउड’ हुनुको कारणलाई निर्देशकले विम्बात्मक शैलीमा पस्किएका छन् ।
५० वर्षको छेउछाउमा पुगेका शाहरुखले तन्नेरी पात्रमा आफूलाई स्वाभाविक साबित गरेका छन् । उनले एउटै सटमा रिस र देखावटी हाँसो पस्कँदा गज्जब लाग्छ । अभिनेताका रूपमा अब्बलता पस्किए पनि पटकथा चयनमा चुकेकै हुन् । यो फिल्म शाहरुखको सम्झनालायक सूचीमा पर्दैन । चुलबुले युवतीको भूमिकामा अनुष्का औसत छिन् । उनको बचपना स्वभाव चटनीझैँ लाग्छ । फिल्ममा करिब आधा दर्जन गीत छन् । ती सबै गीत आफैँमा श्रुतिमधुर भए पनि एकाधबाहेकले फिल्मको ‘न्यारेटिभ’लाई सशक्त बनाउन भूमिका खेलेको छैन ।
इम्तियाजका संवेदनशील फिल्मका पारखीलाई त जब ह्यारी मेट सेजलले निराश बनाउँछ नै, शाहरुखको ‘चार्म’सँग मरिहत्ते हुनेलाई समेत चित्त बुझाउन मुस्किल पर्छ ।
प्रकाशित: श्रावण २०, २०७४